ILoft & Hill Cottage enguNombolo 2 - I-Airbnb
ILoft & Hill Cottage enguNombolo 2
Izindlu zale mihla, ezinesitayile esiphezulu kwiiNtaba zePieniny zesibini okanye isibini esinabantwana. Indlu nganye inokuthatha ubuninzi. 4 abantu. I-glazing enkulu iya kunika iimbono ezimangalisayo kwiiNtaba zeTatra kunye neentaba zePieniny, ezinokunconywa ngokuthe ngqo kwi-sofa kwigumbi lokuhlala kunye nombhede kwi-mezzanine. I-cottage nganye inegumbi lokuhlala elinekhitshi, igumbi lokuhlambela kunye ne-mezzanine enendawo yokulala. Izindlu zifudumeza iimpompo zokufudumala, kwaye kwangaxeshanye zineendawo zomlilo ze-bio-oil, eziza kwenza ukuba urhatya lweqabaka lube mnandi ngakumbi.
Izindlu zangasese zixhotyiswe ngokupheleleyo (ilinen yokulala, iitawuli, intsimbi, ikhitshi kunye ne-microwave). Intuthuzelo inikezelwa yi-air conditioner (ukufudumala kunye nokupholisa). Indawo yokupaka iyafumaneka kwipropathi ngasendleleni. Izitshixo ziyafumaneka kwisiza kwibhokisi yekhowudi. Ndinikezela ngephasiwedi ngefowuni ngosuku lokufika.
Le ndawo yindawo entle ekude nesiphithiphithi sokuphithizela kwabantu. Kwangaxeshanye, sibekwe embindini wengingqi yethu, evumela ukufikelela lula kuzo zonke izinto ezinomtsalane.
Ndidla ngokuba sesiza ngaphakathi kwe-5 km. Ndiyavuya ukunceda ukuba kuyimfuneko. Ngenxa yale njongo, nceda uqhagamshelane nam ngefowuni.